बालबालिकाको चेतना अभिवृद्धिका लागि बालविकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बालविकास केन्द्रमा कक्षाभित्र र कक्षाबाहिर गरिने खालका क्रियाकलापहरू गराउनुपर्छ । यी क्रियाकलापहरू बालबालिकालाई नयाँनयाँ कुराको खोजी गर्ने र आफ्नो वातावरणसम्बन्धी जानकारी लिन उत्प्रेरित गर्ने किसिमका हुनुपर्दछ ।
बालबालिकाको सिकाइलाई सहज र मनोरञ्जनपूर्ण बनाउनका लागि स्वाभाविक स्थितिको वातावरण बनाई स्वतन्त्ररूपले सिक्ने र सुरक्षाको अनुभूति दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बालबालिकाहरूलाई सिकाउने तरिका अनौपचारिक रूपमा सिकाउनुपर्छ । यसका लागि निम्नलिखित शैक्षिक क्रियाकलापहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
क) बालबालिकाको सिकाइका लागि स्वतन्त्र खेल, सामग्रीको प्रयोगबाट प्राप्त गरिने अनुभव, परिवेशअनुसारका स्वतन्त्र क्रियाकलाप, शैक्षिक खेल र निर्देशित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि समयतालिका बनाउनुपर्छ । ठाउँ, परिस्थिति र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखी तोकिएका क्षेत्रहरूका लागि गरिने क्रियाकलापहरू समयावधिमा मिलाएर लानुपर्छ ।
ख) बालबालिकाका लागि चयन गरिने क्रियाकलाप अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । क्रियाकलाप छनोट गर्दा निर्धारित समयमा सकिने र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । क्रियाकलापले बालबालिकामा बोझ वा कुनै किसिमको नकारात्मक भावना पैदा नगरोस् भनी सहयोगीले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप गराउँदा सहकार्य गराउनुपर्छ र बालबालिकालाई नै सक्रिय बनाई उनीहरुको स्तरअनुसार नयाँ–नयाँ कुराहरू खोजी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्नुभन्दा पृष्ठपोषण दिई उनीहरूका अप्ठेराहरू र द्विविधाहरू हटाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ग) वरपरबाट सिक्नका लागि समस्या समाधानको उपयुक्त परिस्थिति बनाई बालोपयोगी शिक्षण तरिका अपनाउनुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप गर्न बालबालिकालाई व्यक्तिगत, समूहगत र पूरा कक्षालाई नै सहयोग पुग्ने गरी हौसला प्रदान गर्ने खालका प्रश्न गर्ने र नयाँ कुरा भन्ने जस्ता रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ ।
घ) बालबालिकाको सिकाइमा सहयोग गर्न उनीहरूको आवश्यकताअनुरूप वर्णन गर्ने थप जानकारी दिने र ठीक बाटोमा ल्याउनका लागि प्रश्नहरू सोध्ने गर्नुपर्दछ । साथै बालबालिकाहरूलाई पनि एकआपसमा प्रश्नहरू सोध्न प्रोत्साहित गनुपर्दछ । यसबाहेक बालबालिकाले वातावरणबाट ज्ञान आर्जन गरुन भन्नका लागि बढी मात्रामा उनीहरूलाई नै संलग्न गराउनुपर्छ । सोका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरी उत्प्रेरित गर्ने खालले छलफल गराउन “के ? किन ? र कसरी” जस्ता प्रश्न गर्नुपर्दछ ।
ङ) बालबालिकालाई प्राथमिक विद्यालयका लागि तयार गर्ने क्रममा बालविकास केन्द्रमा उनीहरूले बिताउने समयमध्ये पूर्व अक्षर चिनारी र पूर्व लेखाइजस्ता क्रियाकलापका लागि योजनाबद्धरुपले केही समय छुट्याउनुपर्छ ।
च) बालबालिकाको सिकाइलाई सहयोग पु¥याउने क्रममा समय र ठाउँ हेरी सहयोगीले सिर्जनात्मक खेलजस्ता व्यक्तिगत क्रियाकलापहरू गराउनुपर्छ । समूह क्रियाकलापका लागि विभिन्न प्रकारका समूह बनाइदिने र उनीहरूले गरिरहेका क्रियाकलापमा आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । विषयवस्तुको प्रस्तुति, सामूहिक निर्देशन– पालन, सामाजिक सीपहरूको प्रयोगजस्ता सामाजिक कार्य गराउँदा पनि सहयोग पु¥याउन आवश्यक हुन्छ ।
छ) बालबालिकाहरूको सिकाइ आफ्नै ढाँचाको हुन्छ । मनोरञ्जनात्मक र खेलयुक्त क्रियाकलापले बालबालिकालाई सिक्न सहयोग पुग्दछ । मनोरञ्जनपूर्ण र खेलकुद क्रियाकलापअन्तर्गत स्वतन्त्र खेल, छलफल, सिर्जनात्मक खेल, शारीरिक खेल, निर्देशित खेलजस्ता क्रियाकलापहरू गराउनुपर्छ । बालबालिका आपँैm र सहयोगी मिलेर बनाएका योजनाअनुसार यी क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ ।
समाचार स्रोत : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा विभाग प्रारम्भिक बालविकास शाखा सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन (पाठ्यक्रम) २०६२
बच्चालाई स्कूल पठाउन हतार गर्ने अभिभावकहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा
अहिलेको अवस्थामा तनावबाट कसरी मुक्त हुने ? पढौँ केही टिप्सहरु…
अहिले पूरै विश्व कोरोना भाइरसको तनाव र चिन्तामा छ। यसले…
तडपाएर मारिएकी हेलिन बोलेक करोडौंको गुञ्जनमा बाँचिरहेकी छन
सरकारको फाशिष्ट रवैयासंग शान्तिपुर्ण लडाइ लडेकी उनलाइ प्राण त्याग्न बाध्य…
कोरोना डायरी : “ब्रेड र बटरको महत्व”
कोरोना भाइरसको कहरः क्वारेन्टिनमा बस्दा यस्ता भोजन खानुहोस्
नेपाल टेलीकमको चेतना मूलका रिङब्याक टोन
यसकारण खतरनाक हुन सक्छ लामो समयसम्म पिसाब रोकेर बस्नु !